जोगीको घरबार हुँदैन, कम्युनिष्टको दरबार हुँदैन ! – Idea Khabar
आइडिया खबर२०७६ कार्तिक २, शनिबार १७:३६
जनगायक जीवन शर्माका छोरा अहिले ‘जीवन-मृत्युसँग संघर्ष गरिरहेका छन्। जीवनभरि जनताका गीत गाउँदै हिँडेका उनै बाबु जीवन छोराको जीवन बचाउने उपाय खोज्दै अस्पतालमा टोलाइरहेका छन्।
जीवनका छोराको उपचारका लागि सहयोगी हात अघि बढिरहेका छन्। तर सम्पत्ति केही होइन, जनता नै सबै हुन् भन्दै हिँड्नेको नियति कस्तो हुन्छ भन्ने ज्वलन्त उदाहरण बनेका छन्।
उनै जनगायक जीवन शर्मासँग काँधमा काँध मिलाएर जनता जगाउँदै हिँडेका चर्चित हाँस्यव्यंग्यकार मनोज गजुरेल अहिले उस्तै उदास छन्। सम्पत्तिको पछि नलागी कम्युनिष्ट पार्टीको सिद्धान्त शिरोपर गरेर हिँडेका जीनव शर्माका छोराले जीवन-मृत्युबीच संघर्ष गरिरहँदा कम्युनिष्टकै सरकारले पनि बेवास्ता गरेकोमा उत्तिकै उदास छन्।
जीवनको बिरामी छोरो बचाउन सहयोग अभियान पनि चलाइरहेका उनै मनोज गजुरेलले शुक्रबार राति मनछुने धारणा फेसबुकमा पोखे। उनले सुरूमै लेखेका छन्, ‘कम्युनिष्ट भनेका जोगीजस्तै हुन् ! तिनको नीजि सम्पती र नीजि स्वार्थ हुँदैन! सम्पूर्ण जीवन देश र जनतामा समर्पित गर्छन् ! जसरी जोगीको घरबार हुँदैन, त्यसैगरी कम्युनिष्टको पनि दरबार हुंदैन !